Guddoomiyaha Baarlamaanka oo caddeeyay in 10-ka bishan uu furmi doono Kalfadhiga 8aad – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 April 4 Guddoomiyaha Baarlamaanka oo caddeeyay in 10-ka bishan uu furmi doono Kalfadhiga 8aad
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo caddeeyay in 10-ka bishan uu furmi doono Kalfadhiga 8aad
Posted on April 4, 2016 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, April 4, 2016: Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa sheegay in 10-ka bishan April uu si rasmi ah u furmi doono kalfadhiga 8aad ee Baarlamaanka waqtigiisa ka harsan yahay mudada afarta bilood.
Gudoomiya ayaa sheegay in maalinta berri oo taariikhda ku beegan 5-ta bishan uu dhici doono kulankii koowaad ee Guddiyada joogtada Baarlamaanka, kaasoo lagu dejin doono qorshihii uu ku howl geli lahaa Baarlamaanka.
“Waxaa dhamaan Xubnaha Guddiyada joogtada ee golasha shacabka ku wargelinayaa inay ka soo qeyb galaan Fadhiga koowaad ee kalfadhiga 8aad oo ay 5-ta bishan April oo ah maalinta Talaadada ay ku yeelan doonaan xarunta Guddoonka, si ay u dejiyaan qorshihii uu ku howl geli lahaa Baarlamaanka”ayuu yiri Guddoomiye Jawaari.
Waxa uu ugu baaqay Xildhibaanada Baarlamaanka inay soo xaadiraan 10-ka bishan oo si rasmi ah u fumi doona kalfadhiga 8aad, waxaana uu xusay in Baarlamaanka uu u yaalo howlo culus.
“Waxaa ku wargelinayaa Xildhibaanada Baarlamaanka inay soo xaadiraan Kalfadhiga 8aad oo furmi doona 10-ka bishan, waxaa inoo yaala howlo culus, dhamaan shuruucda taala mid walba waxaa loo baahan yahay in la soo gunaanado, kuligoodna go’aan laga gaaro, ma jiri doono sharci golaha horyaala oo qabyo looga tagayo”ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Jawaari ayaa sheegay in Xildhibaankii soo xaadiri waayo kalfadhigan si toos loogu gudbin doono Guddiga anshaxa, si tallaabo loogaga qaado.
Kalfadhiga 8aad ee Baarlamaanka ayaa la rumeysan yahay inuu noqon doono kii ugu dambeeyay ee Baarlamaanka Federaalka ee la soo xulay 2012, waxaana bisha Agosto lagu wadaa in la soo xulo Baarlamaan cusub oo la rajeynayo inay ku yimaadaan rabitaanka maamul goboleedyada.
Lama oga habka loo xuli doono Barlamaanka soo socda balse waa laga war heli-doonaa.
Helsinki University to offer degree in Somali language May 16, 2016
Arday Kenyaan ah Oo Ku Biiray Dagaalameyaasha Al-shabaab December 25, 2017
DAAWO: Faaliyaha qaranka 09 04 2016 April 11, 2016
Q.M. oo muddo kordhin ku sameeyay xayiraaddii hubka February 27, 2018
Diyaarad dagaal oo dad shacab ku duqeeyay duleedka Kismaayo July 18, 2017
Geerida General Maxamed Cali Samatar August 25, 2016
Wiil uu dhalay Kim Jong-nam oo warbaahinta si dadban ula hadlay March 8, 2017